खोज्नुहोस् घर किरायाका लागि स्चेम्बर्ग, इलिनोइसमा खुल्ला Realtyww Info
Real Estate Listings: » Residential homes » Houses » US » Illinois » Schaumburg » घर किरायाका लागि स्चेम्बर्ग, इलिनोइसमा1
घर किरायाका लागि स्चेम्बर्ग, इलिनोइसमा
1 - 1 को 8
पोष्ट कोड: 60194
विशेषताहरु: Cooling Features: Central Air, Heating Features: Gas, Forced Air, Driveway: Asphalt, Garage Spaces: 1, Garage Description: Garage Door Opener(s), Transmitter(s), Garage Features: Attached, Parking Features: Parking Type: Garage
टाउन स्क्वायर श्यामबर्गको मुटुमा ओल्ड स्चमबर्गको उच्च खोजी गरियो! खुला फ्लोर योजनाको साथ अद्भुत दोस्रो फ्लोर पछाडि इकाई। भान्साकोठामा थुप्रै क्याबिनेटस्काउन्टर स्पेस, पेन्ट्री कपाट र माइक्रोवेभमा निर्मित छ। भोल्टेड सिलि thहरू बाहिरबाट। निजी पूर्ण नुहाउने, पैदल-भित्र कपाट र बालकनीको साथ विशाल मास्टर बेडरूम। आसन्न नुहाउने साथ ठूलो दोस्रो बेडरूम। एकाईमा ग्यारेज र लुन्ड्री संलग्न गरियो। सम्पूर्ण इकाई रंगिनेछ, भान्छा र नुहाउने ठाउँमा नयाँ फ्लोरहरू र यसमार्फत राम्ररी सफा गर्नुहोस्! १/२१/२०१ completed सम्ममा पूरा गर्नुपर्नेछ।
(847) 301-xxxx देखाउनु
विज्ञापनदातालाई सम्पर्क गर्नुहोस् (847) 301-xxxx